अधिकांश वित्तीय सूचकमा एनएमबि बैंकको उत्कृष्ट प्रदर्शन, नाफा ४७.६९%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वित्तीय सूचकमा प्रगति गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ६१ करोड नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४७.६९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको...
नेपाल बैंकको नाफा रु. १.३५ अर्ब, रिजर्भ १२.५४%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ३५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनासम्म ०.१४ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको...
यस्तो छ दोस्रो त्रैमाससम्म सानिमा बैंकको वित्तीय अवस्था
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनासम्म ७.३८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको...
दोस्रो त्रैमाससम्म प्रभु बैंकको लोभलाग्दो प्रगति, नाफा ३९.८७%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश सूचकमा प्रगति गर्दै आकर्षक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनासम्म ३९.८७ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म बैंकले १ अर्ब ५१ करोड...
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ९४ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १६.५२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म खुद नाफा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक बैंकको दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ५१.४९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। यो अवधिसम्म बैंकको...
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंक लि. र एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) बीच एडीबीको ट्रेड एण्ड सप्लाई चेन फाइनान्स प्रोग्राम अन्र्तगत कर्जा तथा ट्रेड सहयोगको लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)को तर्फबाट स्टेभनविक सल्लाहकार तथा प्रमुख ट्रेड एण्ड सप्लाई चेन फाइनान्स, प्राईभेट सेक्टर संचालन विभाग तथा...
काठमाण्डौ । विभिन्न बैंकर्स,उद्योगी,व्यवसायी,शिक्षाविद एवं व्यवसायिक व्यक्तित्वहरुद्वारा प्रवद्र्धित तथा विभिन्न नवीनतम बैकिग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएकोे प्राइम कमर्सियल बैंकले आज आफनो साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । आज सम्पन्न बाह्रौं वार्षिक साधारण सभाले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर बितरण गर्ने गरी तेह्रों वार्षिक...
काठमाण्डौ ।नेपाल एसबिआई बैंक लि.का शेयरधनीहरुको २७औँ वार्षिक साधारणसभा आज मंगलबार त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाले बैंकको आ.व. २०७६-७७ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (आषाढ मसान्त २०७७ को वासलात, आ.व. २०७६-७७ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंकले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको आज सोमबार दिउँसो ३ बजे बसेको सञ्चालक समितिको ३२५ औं बैठकबाट आव२०७६७७ को मुनाफाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गर्ने गरी हाल चुक्ता पूँजी रु ८ अर्ब ३३ लाख उन्नानब्बे हजार ६७३ को ८ प्रतिशतका दरले हुन आउने रु. ६४ करोड २ लाख ७१ हजार...